ISudoku 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka ku-emulator.online
I-Sudoku umdlalo obukeka njengephazili yenombolo. Kushukumisa ukucabanga okunengqondo-kwezibalo kanye nokucabanga kwamasu. Ekuqaleni kungabonakala kunzima kakhulu, kepha uzobona ukuthi ngokuzijwayeza okuncane, ukwazi amasu afanele, usuku ngalunye kuzoba lula futhi kujabulise ngokwengeziwe.
ISudoku: ungadlala kanjani igxathu negxathu 🙂
Uzothola i- isikwele esikhulu esihlukaniswe izikwele eziningana eziningana, futhi lezi zikwele ezincane zihlelwe zaba yizikwele eziphakathi. Isikwele ngasinye esimaphakathi sinezikwele ezincane eziyi-9 ngaphakathi.
Inhloso yalo mdlalo ukugcwalisa izikwele ezingenalutho ngezinombolo, ukuze:
Yonke imigqa (evundlile) ube nazo zonke izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9, ngaphandle kokuphinda noma yiziphi.
Onke amakholomu (mpo) ube nazo zonke izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9, ngaphandle kokuphinda noma yiziphi.
Konke izikwele eziphakathi banazo zonke izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9, ngaphandle kokuphinda noma iyiphi.
NgesiJapane esihle, igama sonke esilaziyo alilutho ngaphandle kokwenza lula ibinzana elithi "suji wa dokushin ni kagiru", kusho ukuthini "izinombolo kufanele zehluke"Futhi kubhekiselwa ekuzijabuliseni kwamanani okulula kakhulu kwemiyalo elula kakhulu inhloso yayo ukugcwalisa wonke amabhokisi angenalutho ngokulandelana kwezinombolo okuhlelekile. Lokho kudinga umqondo nokubonisana ngesinqumo.
Umlando weSudoku 🤓
Ngaphandle kwegama layo, I-sudoku ayidalwanga eJapan, okusungulwayo kuthiwa kwenziwa yisazi sezibalo saseSwitzerland ULeonhard Euler. Ekhulwini le-XVIII, udale lokho akubiza ngokuthi "tikwele latin", umdlalo lapho izinombolo kufanele zivele kanye kuphela kumugqa ngamunye nakukholomu ngayinye. Imigqa engu-9 namakholomu ayi-9 kwaduma lapho yaqala ukushicilelwa e-US. Ngawo-1970.
Kwakukhona lapho ngaphakathi 1984, lapho amaJapane UMaki Kaji wahlangana nomdlalo. Lapho ebuyela ezweni lakubo, UKaji uwuthuthukisile umdlalo (Wanikeza izinombolo ezisikhombayo, esevele zivele ebhokisini, wenza nobunzima obuhlukahlukene, wabhabhadisa wakwenza kwaba ngumkhuhlane phakathi kwabantu bakubo: namuhla iJapan inamagazini angaphezu kuka-600,000 akhethekile eSudoku.
ENtshonalanga, ukugembula kwahlanya ngo-2005. Isinyathelo sokuqala sathathwa ngo-1997, lapho iNew Zealander UWayne Gould uvakashele eJapan, wafunda ngeSudoku futhi wenza uhlelo lwekhompiyutha lomdlalo, olakhishwa ngo-2004. Ezinyangeni eziyi-8 ezedlule, indalo yakhe yomdlalo yaqala ukushicilelwa nsuku zonke yiphephandaba iThe Times, elalandelwa ngokushesha ngumncintiswano emhlabeni jikelele.
Izinhlobo zesudoku ngokungeziwe kokujwayelekile:
Okuvundlile: Ukudlala, kufanele ulandele imithetho efanayo ne-Sudoku yendabuko, okungukuthi, qedela zonke izikwele usebenzisa izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9, ngaphandle kokuphindaphinda emigqeni evundlile neqondile. Isici esivelele kakhulu sale phazili yesudoku ukuthi, ngaphezu kokuxhuma imigqa emi mpo futhi ivundlile, kufanele wenze ama-diagonals amabili aphakathi nendawo enza i-X, enezinombolo ezisuka ku-1 kuye ku-9 nokuthi aziziphindi.
Okungajwayelekile: inemithetho efanayo neyakudala, ngaphandle kokuthi izikwele azijwayelekile.
I-Kakuro: Ukudlala i-kakuro akunzima kakhulu, yize kubhekwa njengokuyinkimbinkimbi kune-sudoku. Inhloso ukubeka izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9 ngendlela yokuthi aziphindaphindwe ngokulandelana kolayini nasekulandelaneni kwekholomu, lapho kudingekile ukuthi isamba sezinombolo (ngokuvundlile noma mpo) silingana nephoyinti elihlobene .
Umbulali: kuyinhlanganisela yeSudoku neKakuro. Ngakho-ke, kunezindawo ezihlukanisiwe lapho kungabikho izinombolo eziphindayo futhi isamba sazo okufanele sinikeze inani elibonisiwe.
Megasudoku: kufanele wenze amadijithi 1 kuye ku-12 avele kanye kuphela kulayini ngamunye, ikholomu, nesikwele. Ifana neyendabuko kepha kunezinye izinombolo ezintathu.
I-Minisudoku: Ihlukile kweyendabuko ngokwakhiwa kwenani elincane lezikwele.
IMultisudoku: Yakhiwa ngamaphazili amaningi e-sudoku ahlangana ndawonye akha eyodwa.
Amathiphu wokuxazulula iSudoku 🙂
Into yokuqala okufanele uyenze ukuqala ukuxazulula iSudoku khetha ifomethi ozoyiqondisa (umugqa, ikholomu noma isikwele). Uma ungakhethi okukodwa bese uzama ukwenza yonke into ngasikhathi sinye, ungagcina ushintshile futhi udide konke, okuzokuthatha isikhathi eside emdlalweni.
Yisho, isibonelo, ukhethe ukuqala ukuxazulula ngemigqa. Ngemuva kwalokho uzohlaziya umugqa wokuqala ovundlile bese ubona ukuthi yiziphi izinombolo esezivele zikuzo nokuthi yiziphi ezingekho. Gcwalisa izikwele ezingenalutho ngezinombolo ezingekho, unake izinombolo ezikukholamu ukuqinisekisa ukuthi ayiziphindi.
Ngemuva kokuxazulula umugqa wokuqala, iya kulayini wesibili bese uphinda inqubo. Bona ukuthi yiziphi izinombolo osuvele unazo nokuthi iziphi ezingekho ukuqala ukuzigcwalisa. Uma ungenayo inombolo 1 kulayini wesibili, iya esikweleni sokuqala esingenalutho bese ubhala u-1 bheka ikholomu yaleso sikwele. Uma inombolo 1 isivele ikhona kuleyo kholamu, isuse bese ubhala u-1 kwesinye isikwele. Khumbula ukuhlola njalo ukuthi awuphindi yini inombolo esivele isikwele.
Landela lesi sigqi kuze kube sekupheleni, futhi ungakha umdlalo wakho weSudoku. Ekugcineni, kuba nzima ukuthola indawo elingana nezinombolo ngaphandle kokuyiphinda, kepha noma yini izama nje ukushintsha izinombolo zendawo ukwenza kube lula.
ISudoku: amasu 🤓
Nawa amanye amathiphu namasu alula okukusiza ukuxazulula iphazili yeSudoku.
Usebenzisa amamaki, ungasebenzisa lezi zeluleko ezilula (futhi ezibonakalayo):
Noma kunini, bukela umdlalo eduze kwamaseli anenombolo eyodwa kuphela kumamaki. Lokhu kukhombisa ukuthi kunethuba elilodwa kuphela lalelo seli.
Inombolo efihliwe kuphela
Imvamisa ubhekisisa, ungathola i- "inombolo efihliwe kuphela". Le nombolo ayiveli kuphela kumamaki. Yiyona kuphela engenzeka ikhethwe kumugqa, ikholomu noma igridi engu-3x3, ivela kuphela phakathi kwezinye izinombolo. Bona isithombe eceleni:
Kulesi sithombe, ungabona ukuthi izinombolo 1 no-8 zivela kanye kuphela kuma-grid abo angu-3x3. Lokhu kukhombisa ukuthi kumele babekwe kulezo zikhundla.
1. Uma nganoma yisiphi isikhathi uthola izinombolo ezifanayo kuphela kumamaki eqembu (irowu, ikholomu noma igridi), kusho ukuthi lo mbhangqwana kufanele uvele kulawa maseli amabili. Bona isithombe esingezansi:
2. Kulomfanekiso siyabona ukuthi izinombolo 1 no-3 zivela zodwa kumaseli amabili, ngakho-ke kumele zisetshenziswe kulawo maseli. Asazi nje ukuthi iyiphi inombolo ehamba esitokisini ngasinye. Kodwa-ke, siyazi ukuthi izinombolo 1 no-3 azikwazi ukuvela kwamanye amaseli angenalutho. Ngakho-ke, sinethuba elilodwa kuphela ngakunye.
Kulabo abangafuni ukusebenzisa ama-brand, sizochaza isu elilula futhi eliwusizo kakhulu.
Imigwaqo ewele imigqa kungenzeka into yokuqala abantu abayifundayo lapho bedlala iSudoku. Abadlali bafunda ngokwenza, ngoba kulula futhi kuyisisekelo.
Kuyo, umdlali kufanele akhethe inombolo (imvamisa leyo etholakala kakhulu emdlalweni) bese edweba imigqa engokomqondo emigqeni nasemakholomu lapho leyo nombolo ikhona khona.
Esibonelweni esilandelayo, sikhetha inombolo 9. Sithola zonke izindawo lapho sikhona futhi sidweba imigqa engokomfanekiso emigqeni nasemakholomu ukukhombisa ukuthi inombolo 9 ayikwazi ukubekwa kulezo zikhundla. Uma lokhu sekwenziwe, simaka izikhundla zamahhala ngokuluhlaza.
Note : Kubalulekile ukuqaphela ukuthi amanye amaseli angenalutho, yize engazange asuswe yimigqa yokuqagela, awamakiwe njengamahhala ngoba anenombolo 9 ku-gridi efanayo ye-3x3.
Ngokuhlaziya izikhundla zamahhala, siyabona ukuthi enkabeni ye-3x3 grid kunendawo eyodwa kuphela yamahhala yenombolo 9, ngakho-ke singayibeka kuleso sikhundla.
Uma lokhu sekwenziwe, siphinda inqubo yolayini abacabangayo ngenombolo esisanda kuyibeka. Bheka umphumela:
Futhi kumele sihlaziye izikhundla zamahhala sifuna ukunyakaza okusha. Njengoba sikwazi ukubona, kugridi esezansi emaphakathi kunesikhundla esisodwa kuphela samahhala. Ngemuva kwalokho singabeka inombolo 9 bese siphinda inqubo engenhla.
Ngalesi sikhathi isikhundla esisodwa samahhala sivele ekhoneni elingezansi kwesobunxele, ngakho-ke sibeka abayi-9 kuleso sikhundla futhi saqhubeka necebo.
Manje sesiyabona ukuthi sinezikhundla ezine zamahhala kunombolo 9, okungekho kulokhu okuhlukile kugridi eyi-3x3 ekuyo. Ngakho-ke, asazi ukuthi singabeka kuphi i-9 sisebenzisa leli su lodwa.
Enye indlela kungenzeka khetha inombolo entsha bese uphinda leli qhinga elisanda kuchazwa. Cishe uzokwazi ukugcwalisa amangqamuzana amaningi usebenzisa leli qhinga nje.
Manje njengoba usunamasu athile, zijabulise futhi usebenzise ubuchopho bakho ngokudlala iSudoku.🙂
ISudoku ngumdlalo odinga isikhathi nokucabanga, kepha uma usuyazi imithetho, kuba lula ukuyidlala.
ISudoku ngokuvamile siqukethe itafula le-9x9, eyakhiwa Amagridi ayi-9, abanayo Amaseli ayi-9 ngokulandelana.
Umqondo oyinhloko womdlalo ukuthi umdlali kufanele ugcwalise itafula ngezinombolo kusuka ku-1 kuye ku-9, ngaphandle kokuphindwaphindwa kwezinombolo kulayini noma igridi efanayo.
Uma ulandela yonke le mithetho futhi uphatha ukugcwalisa itafula, umdlalo uzowinwa!
Amatafula eSudoku zenzelwe ukuba nesisombululo esisodwa Futhi ngenxa yalokho, kujwayelekile ukuthi singakutholi kahle okokuqala.
Ngalesi sizathu esifanayo, abadlali abaningi bakhetha ukubhala izinombolo ngepensela ukuze zisulwe uma benze iphutha.
Esinye isiphakamiso okufanele usicabangele yi- ukusetshenziswa kwezimpawu zokuthengisa. Ngama-brand, sisho ukuthi ukubhala amathuba ahlukahlukene ngaphakathi kweseli ngalinye. Okusho ukuthi, uma iseli lingaba nezinombolo 3 no-9, okuhle ukukhombisa (ngosayizi omncane) zombili izinombolo nokuxazulula lonke ithebula, kuze kufinyelelwe inombolo ehambelana nalelo seli.
Kwezinye izinhlobo zeSudoku, lawa mamaki amancane asevele efakiwe etafuleni, ukwenza lula ukuxazululwa kwawo. Kulezi zinguqulo esezivele zifaka amamaki, kunamaqhinga azokusiza ukuxazulula iphazili:
Noma nini etafuleni leSudoku (elinamamaki) uthola inombolo esitokisini esisodwa, lokhu kuyi- isignali yokuthi kunethuba elilodwa kuphela lalelo seli, okungukuthi, kufanele ushayele leyo nombolo ngokushesha esitokisini.
ISudoku kwesinye isikhathi ingaba ngumdlalo onzima, kepha kunamaqhinga amancane okusisiza ukuthola umdlalo. Isibonelo, kumageyimu lapho kunemikhiqizo, kwesinye isikhathi sithola lokho okubizwa ngokuthi "inombolo efihliwe kuphela".
Le nombolo ayiveli kuphela esitokisini (ihambisane nezinye izinombolo), kodwa ukuphela komuntu ongabakhona kulayini, ikholomu noma igridi engu-3x3.
Okungukuthi, lapho kugridi eyi-3x3, ngokwesibonelo, inombolo engu-3 ivela futhi ingaveli kunoma iyiphi enye iseli yalelo gridi, kuyisibonakaliso sokuthi inombolo engu-3 ingeyeseli elifanayo.
Uma nje uthola izinombolo ezifanayo kuphela kumamaki wegridi engu-3x3, kusho ukuthi leli bhangqa empeleni kumele ubekhona kulawa maseli amabili, okuwukuphela kombuzo ovelayo lapha ukuthi yimuphi ozoba kulowo nalowo.
Uma inguqulo yakho yeSudoku ingezi namamaki noma uma ungafuni ukusebenzisa amamaki, kunelinye isu elilula ukukusiza ukwazi kahle lo mdlalo.
Ubuchwepheshe bemigqa ewele busetshenziswa kabanzi, ngenxa yokusetshenziswa kwayo okulula kakhulu. Iqukethe i- khetha inombolo evela kaningi etafuleni lonke bese udweba (ngepensela ukuze ungadideki) imigqa emigqeni nasemakholomu lapho leyo nombolo ihlotshaniswa khona.
Ngemuva kokudweba yonke imigqa, siya esigabeni sokumaka amaseli angamboziwe kulayini ofanayo. Ngemuva kwalokho, kuhlolisiswa ukuthi yimaphi ama-gridi ama-3x3 angenayo inombolo engu-9 futhi anesikhala (esingadluliwe) ukusibeka.
Uma lokhu sekwenziwe, khetha enye inombolo bese uphinda lelo su elifanayo, aze agcwaliswe wonke amaseli. Ekugcineni, udinga ukubheka ukuthi kunezinombolo eziphindayo kulayini noma igridi efanayo. Uma kungekho zinombolo eziphindaphindwayo, umdlalo uzowinwa.
Isikhathi sokudlala nobunzima
Asikho isikhathi esiphezulu sephazili ngayinye yeSudoku, futhi umdlali ngamunye angawujabulela umdlalo inqobo nje uma efuna.
Umdlalo weSudoku ingahluka phakathi kwemizuzu emi-5 nengama-45, kepha konke kuya ngesipiliyoni somdlali nezinga lobunzima bomdlalo. Kalula nje, lapho umdlalo unzima kakhulu, ukucabanga okuningi kuyadingeka, ngakho umdlalo uzothatha isikhathi eside.
Ngokuqondene nobunzima, imvamisa icacile esihlokweni sewebhusayithi noma semagazini. Kukhona imidlalo elula yabaqalayo futhi inzima kakhulu kubadlali abanolwazi oluningi. Kwabachwepheshe, amazinga anzima kakhulu angaba yinselele ngempela, njengoba amazinga aqala ukubukeka ehambisanayo kakhulu, lapho kubonakala khona izinombolo. Ngakho-ke, ngaphezu kokucabanga okuyisisekelo, futhi udinga isu elithile.
Futhi ngakho-ke i-athikili iyaphetha. Halala! Manje uyazi ukudlala iSudoku, noma okungenani unolwazi olwanele lokuxazulula lezi puzzle!